Fahazoan-dàlana ara-bola - Mpanamboatra vola an-tapitrisany
Ny fiarahanao maneran-tany amin'ny 106 TOKO FIKAMBANANA
Tariho anao amin'ny fahazoan-dàlana (fahazoan-dàlana) sy ny fahazoan-dàlana ilazana ny orinasanao. Torolàlana amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana / fahazoan-dàlana.
Manome torolàlana amin'ny fandefasana ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana / fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny antontan-taratasy fanohanana sy ny fandefasana ny saram-panjakana ary manafaingana ny fizotran'ny fahazoan-dàlana famandrihana.
Ny ekipanay manam-pahaizana momba ny fahazoan-dàlana dia mitari-dalana anao amin'ny fametrahana ny fanamafisana sy ny fanavaozana, mba hahafahanao mifantoka amin'ny orinasam-pifandraisana lehibe indrindra.
Mpivarotra vola vahiny, fahazoan-dàlana amin'ny fitantanana fananana, famatsiam-bola iraisan'ny besinimaro, fahazoan-dàlana amin'ny Banky fampiasam-bola, Fahazoan-dàlana Sandbox, Scheme fampiasam-bola miaraka & Fahazoan-dàlana, Famatsiam-bola ary fanodinana vola, Fahazoan-dàlana ho an'ny mpandraharaha mifototra amin'ny serivisy (SBO), Mpamatsy tolotra fandoavam-bola, Skema fampiasam-bola iraisana (Cis ) & Fahazoan-dàlana, Fahazoan-dàlana amin'ny serivisy ho an'ny mpanelanelana amin'ny fandoavam-bola, fisoratana anarana amin'ny mpitantana sy mpanam-bola ho an'ny famatsiam-bola, andrim-bola sy fandoavam-bola sns…
Million Makers amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa iraisantsika iraisam-pirenena sy ny fikambanana miaraka amin'ny mombamomba ny fahazoan-dàlana dia manome fanohanana licence any amin'ireo firenena voalaza etsy ambany ireo
Manolotra vahaolana momba ny fahazoan-dàlana any amin'ireto firenena manaraka ireto ny Starting BUSINESS:
Ankoatry ny, dia manome fahazoan-dàlana ho an'ireo sokajy voalaza etsy ambany sy amin'ny faritra maro samihafa koa izahay.
Mitantana fantsom-pifandraisana be dia be an'ny mpanjifa iraisam-pirenena miasa eo amin'ny sehatra rehetra izay manana orinasa miverimberina avy amin'izy ireo, miaraka amin'ny fahatsapana ny fifandraisanay maharitra amin'ny mpanjifantsika mandritra ny taona maro dia noho ny serivisy ataontsika, ny fiaraha-miory ary ny vidiny mifaninana.
Ny antontan-taratasy momba ny fangatahana fahazoan-dàlana dia miovaova amin'ny fanapahana ary ny karazana fahazoan-dàlana nangatahana. Fa ireo antontan-taratasy fototra takiana amin'ny fahazoan-dàlana orinasa dia voalaza etsy ambany:
1. Vita ny taratasy fangatahana vita sy vita sonia
2. Fitaovana feno amin'ny antontan-taratasim-pandraharahana ao aminao. Ohatra: Taratasy fanamarinam-bokatra, Memorandum ary lahatsoratra momba ny fikambanana, Mpikira mpitantana, Mpampiasa ary mpiandraikitra na antontan-taratasy mitovy. Raha toa ka mihoatra ny 12 volana ny orinasa fangatahana, ao anatin'ny sehatra vitsivitsy sy / na miorina amin'ny karazana lisansa sy ny fahazoan-dàlana 6 volana, ny taratasy fanamarinana tsara.
3. Porofon'ny fandoa vola ny renivohitra statutory ambany indrindra
4. Ny biraonao sy ny fomba fiasa anatiny sy ny fomba fiasa ao anatiny, ao anatin'izany ny fandaminana ny fitantanana orinasa, ny fitantanana ny risika ary ny politikany sy ny fomba fanangonam-bola, sns.
5. Drafitr'asa momba ny fandraharahana miaraka amin'ny famolavola ara-bola 3 ka hatramin'ny 5 taona.
Azafady mba omeo ireto rakitra manaraka ireto ho an'ny Talen'ny rehetra, tompona tombontsoa, ​​mpana-bola, Signatories nahazo alalana.
Fametrahana antontan-taratasin'ny orinasa voarindra manana:
Tarika misy ny pasipaorony manan-kery.
Tsy maintsy asiana sonia ilay pasipaoro ary tokony hanao sonia ilay sonia eo amin'ny taratasy fangatahana ny sonia.
Ny sary dia tsy maintsy hazava tsara ary manana kalitao tsara
Ny taratasim-panoratana avy amin'ny Banker an'ny tarehimarika na voamarina (daty tsy mihoatra ny 3 volana). Saika ny banky rehetra eran'izao tontolo izao no mitana ny "Taratasoratra Referera". Azonao atao ny mangataka tsotra amin'ny taratasy ho an'ny bankinao, izay mitazona kaonty. Ny taratasy fanamarihana dia tokony hanondro ny fanamafisana ny vanim-potoanan'ny fifandraisana, ny kely indrindra 2 taona, ny laharan'ny kaonty, tsara kokoa ny mandanjalanja satria ao amin'io daty io sy ny fanamarihana ny "asan'ny kaonty dia mahafa-po".
Taratasy fanoratana momba ny pejy tany am-boalohany na voamarina, tsy maintsy avoakan'ny orinasa matihanina, ohatra, ny orinasan-kaonty, CPA, Law Firm, sns izay manamarina ny vanim-potoanan'ny fifandraisana, 2 taona farafahakeliny ary manonona fa "mahafa-po ny raharaham-barotra".
Herin'ny mpisolovava (raha ilaina)
Fanamarinana ny fisintonana polisy
Incase, ireo antontan-taratasy natolotra izay tsy amin'ny teny anglisy, amin'izany dia ilaina ny fandikana voamarina, vice-a-versa, noho ny jusrisdiction vitsy.
Ny fahazoan-dàlana amin'ny famoahana fahefana, amin'ny fotoana rehetra dia mety mangataka ny fametrahana ireo antontan-taratasy fanampiny na fampahalalana, raha toa ka heveriny fa ilaina.
Ny talen'ny orinasa mpangataka dia tsy tokony ho olona manana vatana fotsiny.
1. Mpivarotra vola any ivelany
1.1. Fizarana entana derivatives: Option Binary, ho avy
1.2. Fizarana vola derivatives: Fahazoan-dàlana Forex, Fahazoan-dàlana antoka / stock Trading
2. Scheme fampiasam-bola iraisana (Cis) sy fahazoan-dàlana
2.1. Drafitra ara-bola iombonana (CI S): Tahiry tokana
2.2. Vola mihidy mihidy
3. Fahazoan-dàlana Banky Investment
4. Fahazoan-dàlana momba ny serivisy ho an'ny fandoavam-bola
5. Fahazoan-dàlana avy amin'ny fantsom-boaty (fahazoan-dàlana amin'ny fifanakalozana virtoaly)
6. Fahazoan-dàlana mitantana Asset
1. Fanaterana vola sy fanodinana fandoavam-bola
2. Tahirim-bola iraisan'ny besinimaro
3. fisoratana anarana amin'ny tahirim-bola sy Administrator ho an'ny vola iraisana
1. licence Operator-based (SBO)
2. Torolàlana momba ny fahazoan-dàlana amin'ny vola
2. Fahazoan-dàlana An-tsarobidin'ny Mitovy Vidy amin'ny fanorenam-bidy ao Singapore
3. Fahazoan-dàlana Travel Travel
1. Fiarovana / Saham-bola, Forex Licensev
1. Fahazoan-dàlana varotra Forex
2. Mpanome serivisy fandoavana
1. Andrim-bola sy vola fandoavam-bola
Teny manan-danja amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny serivisy ara-bola
Niezaka ny mamaritra sy manome vaovao momba ny serivisy momba ny fahazoan-dàlana mifandraika amin'ireo mpanolotsaina mora vidy indrindra izahay, serivisy mora indrindra ho an'ny, orinasa mpahay lalàna, mahazo, mpanolo-tsaina ambony, serivisy mora indrindra, mpisolovava mora vidy, mpividy iraisam-pirenena, mpanolo-tsaina, mpisolo vava mora vidy, serivisy tsara indrindra ho an'ny, mora vidy mpisolovava, mpanolo-tsaina ambony, mpanolotsaina ambony, mangataka, mpanolotsaina, antontan-taratasy takiana ho an'ny, fomba fiasa ho an'ny, orinasa mpahay lalàna mora vidy indrindra, fomba ahazoana, mpisolovava ambony, serivisy ahazoana alàlana, sarany, mpanolo-tsaina ambony ho an'ny, antontan-taratasy ilaina, firaketana lalàna mora vidy indrindra ho an'ny , mpisolovava mora vidy indrindra, any ivelany, fahazoana, s, orinasa mpahay lalàna mora vidy, mpanolotsaina mora indrindra, sarany, fizotran'ny, serivisy, mpanolo-tsaina tsara indrindra, fahazoan-dàlana, tolotra ara-bola, mpanolontsaina tsara indrindra, fangatahana, mpisolovava tsara indrindra, mpanolo-tsaina mora vidy, mpisolovava ambony, mpisolovava, firenen-dalàna ambony, mpisolovava mora vidy indrindra, orinasa mpisolovava tsara indrindra, mpisolovava, mpanolontsaina mora vidy indrindra, mpanolo-tsaina mora vidy indrindra, mpanolo-tsaina tsara indrindra, mpanolotsaina ambony indrindra, orinasa misahana ny lalàna ambony, lafy tsara indrindra ultants, firenen-dalàna ambony, firenen-dalàna mora indrindra, serivisy ambony, consultant tsara indrindra, mpanolotsaina mora indrindra, serivisy ambony, mpisolovava tsara indrindra, ny fomba fangatahana, serivisy ambony ho an'ny, serivisy ambony, mpisolovava mora indrindra, mahazo, orinasa tsara indrindra ho an'ny, ambony mpanolotsaina, ambony, mpanolotsaina mora vidy, mora vidy, mora indrindra, mpanolo-tsaina mora vidy indrindra, serivisy ahazoana fahazoan-dàlana, fomba ahazoana, orinasan-dalàna tsara indrindra, fomba ahazoana mpisolovava mora indrindra, serivisy mora vidy indrindra, iraisam-pirenena, iraisam-pirenena, serivisy tsara indrindra, orinasan-dalàna ambony , mpanolotsaina tsara indrindra, mpisolovava ambony, mpisolovava ambony, mpisolovava ambony, mpanolotsaina tsara indrindra, amin'ny Internet, mpanolotsaina ambony indrindra, mahazo, endri-javatra, mpisolovava tsara indrindra, vola, vidiny, serivisy mora vidy, mpanolo-tsaina mora indrindra, serivisy tsara indrindra, iraisam-pirenena mora indrindra, mora vidy mpanolotsaina, serivisy momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny, serivisy mora indrindra, any ivelany, orinasa mpahay lalàna mora vidy indrindra, mpanolo-tsaina ambony.